-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်အဖွဲ့… – PVTV Myanmar
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံ
-ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်တွင် အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်လူသတ်စစ်တပ်က အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကိုလက်နက်ကြီးများ၊ တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်များ အသုံးပြု၍ တိုက်ခိုက်ခြင်းအတွက် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်အနေဖြင့် ချက်ခြင်းကာကွယ်ပေးရေး အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက တောင်းဆို
-ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မှာ အကြမ်းဖက်လူသတ်စစ်တပ်က အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ လူသားတံတိုင်းအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိန်သံရုံးတွေက လူမှုကွန်ယက်တွေကတစ်ဆင့် စာအသီးသီးထုတ် ပြန်ပြီး ပြစ်တင်ရှုတ်ချ
-အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နိုင်ငံတကာ ကွန်ရက် ဒုတိယအကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံပွဲအဖြစ် အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို မေလ ၁၅ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ကျင်းပပြုလုပ်စတဲ့ PVTV ရဲ့ ညနေပိုင်းသတင်းအစီအစဉ်ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Like – 7.2K Share – 1015
2021-05-16 at 8:39 PM
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လုပ်ပါအားပေးနေပါတယ် အလုပ်တစ်ခုက မပီးမြှောက်သေးတဲ့အချိန်မှာ ဝေဖန်မှုဆိုတာ ကြုံကြရမှာပါ 💪💪💪💪
အပြည့်အဝ ရပ်တည်ထောက်ခံပါတယ် ၊ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည် ။
2021-05-16 at 8:53 PM
ကြည့်ရတာ မရှင်းဘူး မကြည်ဘူး နည်းနည်းမှူံန်တယ် ဝါးတယ်
2021-05-16 at 8:58 PM
Mashwe Yee says:
2021-05-16 at 9:19 PM
2021-05-16 at 9:36 PM
လေသေနက်တွေ ပြစ်တာ ရပ် လက်တွေ့ သေနက်တွေ ပေးပါ
Pyae Phyoe Aung says:
အရေးတော်ပုံ ‌ ‌‌
ေဒါင္းစပ္ မွာ ရြာတဲ့မိုး ကရင္ says:
2021-05-16 at 10:38 PM
NaingNaing Oo says:
2021-05-16 at 11:19 PM
နိုင်ငံရေး စိတ်မဝင်းစားဘူး ပြောတဲ့ သူတို ဒီခလေးဟာ ခင်များတို့ရဲ့ သား သမိးဆိုရင့် ခင်များတို့ရဲ့ စိတ်ထဲ မျက်ရည်တွေ ခံနိုင်ရည် ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး ကြည်ပါ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ နိုင်ငံမှာ ဘာမှာ မဆိုင်သေးဘူး ခလေးတွေ ဘဝ ဆိုးလိုက်တာ ဗျာ
2021-05-16 at 11:22 PM
Ma Thuzar Nwe says:
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ထားသော မိဘတဦး အနေဖြင့် စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်ရှင့်
စစ်ကောင်စီက လျှောက်လွှာကိုသွားမ ထုတ်ပါ
2021-05-17 at 6:54 AM
ဂျပန်နိင်ငံမှာ ဆိုအတန်း မလိုဖူး / အောင်တာ ကျတာမရှ်ဖူး – မလိုအပ်ဖူး. တစ်ဦးတစ်ယောက်ခြင်းစီရဲ့ဝါတနာ အရည်အသွေး ကိုပဲဦးစားပေးသင်ယူခဲ့ကြတာ( ၂ တန်း ၃ တန်းဆိုလည်း ဘယ်သူ့မှအထင်မသေးဖူး နှိမ်ချတာမရှိဖူး ) ညီတူတဲ့ လစာငွေ (အနည်:ငယ်သာကွာခြား မှုရှိသည်)
NUG အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ အရမ်းမှန်ကန် အဆင့်ရှိ Human Right ဘောင် နဲ့ညီမျှပါတယ်.အပြည့်အဝထောက်ခံပါသည်.
Ko Htun Linn Aung says:
2021-05-17 at 5:44 PM
စစ္ကားကို မီးရႈိ႕ စစ္သားကိုေသနတ္နဲ႔ပစ္တ့ဲေကာင္ေတြက အျပစ္မဲ႔အရပ္သားတ့ဲလား။ ခ်ီးစားျပီးေျပာေနေရးေနၾကတာလားကြား
2021-05-17 at 9:00 PM
သန္း ဝင္း ေမာင္ says:
အမျိုးသား အမျိုးသမီး တစ်ယောက်တစ်လှည့်ကြေငြါတာကောင်းမယ်ထင်တယ် bbc voa တို့လိုသတင်းကြော်ငြါနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ
Cypro Tone says:
Kyaw Thin Aye says:
2021-05-19 at 8:46 PM